Asa soratra : « Madame à la campagne », boky vaovaon’i Michèle Rakotoson | NewsMada
Asa soratra : « Madame à la campagne », boky vaovaon’i Michèle Rakotoson
Loharanon’aingam-panahy toa tsy ho ritra ny andavanandrom-piainan’ny Malagasy ho an’ny mpanakannto. Anisan’izany i Michèle Rakotoson, anisan’ny sangany eo amin’ny asa soratra ary misongadina amin’ny maha mpanoratra frankofonina azy.
Nampahafantarina, ny asabotsy maraina teo tetsy amin’ny Institut français de Madagascar (IFM) etsy Analakely, ny fivoahan’ny boky « Madame à la campagne, chroniques malgaches », nosoratan’i Michèle Rakotoson ary natontan’ny trano fanontana Dodo Vole. Nitafa mivantana tamin’ny mpanoratra ireo liana amin’ny asa soratra toy izao. Dinika niarahana ihany koa tamin’i Kemba Ranavela, mpanoratra sady mpampianatra.
Hitan’ny maso rehetra ny fahantrana sy ny fahasahiranana isan’andro, raha vitsy ireo mahatsapa ny atao hoe « tena fiainana » ao anatin’izany. Iray amin’izany ny mpanakanto. Ao ny mampifantoka izany kantony izany amin’ny fitakiana ny rariny, amin’ny fitolomana mba hahazoan’ny mahantra maro anisa ny anjara, sns.
Fa misy koa ny mahay maneho izany andavanandrom-piainana sarotra izany amin’ny alalan’ny zavakanto. Singanina ny mpanao hosodoko, ny mpakasary, ny mpahay kanto araka endrika amam-bika, sns. Ankoatra ireo, resy lahatra ny hafa fa ao ambadik’izao fahasarotana izao no ahafaha-mandrefy ny dingana vita amin’izay tanjona napetraka hotratrarina. Sarotra ny mamaritra ny fahombiazana raha azo moramora foana ny zava-drehetra.
Hita taratra ao amin’ity boky vaovao nosoratan’i Michèle Rakotoson io fomba fijery farany io. Marihina fa tsy tantara akory ny « Madame à la campagne, chroniques malgaches », fa angon-dahatsoratra. Tsy lahatsoratra fampahafantarana vaovao ihany koa fa fitantarana zava-nisy teny an-tsefantsefam-piainany teny sy fanehoan-kevitra.
Raha tsiahivina, handimby an’i Michèle Rakotoson amin’ny fampahalalana asa soratra vaovao toy izao, etsy amin’ny IFM, i Johary Ravaloson.